အားလုံးမှားယွင်းနေခြင်းသို့မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်အိမ်ထောင်မင်္ဂလာ၏ 30 နှစ်ကောင်းသောမိန်းကလေးများလုပ်ပေးအပိုင်းပိုင်းသွားသည်
interesnenkoe, ချစ်ခြင်းမေတ္တာ, ဆက်ဆံရေး / မှစ. နံရံကပျကျွွောငာ
လူသားမြားသကာလ၌ရှိသကဲ့သို့အရာရာ: အိမျတျောကို, ခင်ပွန်း, မိသားစု, အလုပ်။ အပြင်ပန်းအပေါင်းတို့, လက်ျာ, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမပျော်ရွှင်မှုကိုရှိသေး၏။ အမျိုးသမီးများမိတ်ဖက်ကိုယ်တိုင်ကနားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ချက်အတွက်မကျေနပ်မှုများနှင့်ဆငျးရဲဒုက်ခစုပြုံလေ့ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ဒီအဖြစ်ပျက်ကိုဘယ်တော့မှလတံ့သောနားလည်မှုလာပါတယ်။ ဒါရှောင်ရှားရန်လိုခငျြသောကွာရှင်း,
အိမ်ထောင်ရေးပျော်ရွှင်မှုကိုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြကြောင်း7ခြေလှမ်းများ
သူတို့တစ်မိသားစုကိုစတင်ရန်ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ရဲ့စုံတွဲအတော်များများဟာ, သူတို့ရဲ့မတ်ေတာအသက်အဘို့ခိုင်ခံ့ခဲ့ချင်တယ်။ သို့သော်အနည်းငယ်ကအိမ်ထောင်မှာဆကျဆံရေးကောငျး, နှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားသူ့ဟာသူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စီမံခန့်ခွဲ။ သင်တန်း၏, ကျနော်တို့ကစုံလင်သောဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပျက်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာပုံတော်ကိုရပ်တန့်တော်မမူကြောင်းနားလည်
ချစ်ရသူတစ်ဦးတစ်ရင်ခုန်စရာညဦးယံအချိန်ကဲ့သို့အ Options ကို
လက်တွေ့အကွံဉာဏျ (Layfkahi), ချစ်ခြင်းမေတ္တာ, ဆက်ဆံရေး / မှစ. နံရံကပျကျွွောငာ
အချစ်ဇာတ်လမ်းအကြိုက်ဆုံး: နည်းလမ်းများနှင့်နည်းစနစ်။ ချိန်းတွေ့, ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အသိအမှတ်ပြုမှု: တစ်ခစျြတျောတစျခုအတှကျရင်ခုန်စရာစိတ်ကူးများ။ နံနက်ယံ၌, မြေတပြင်လုံးတနေ့နှင့်တညဉ့်အခါ: အိမ်မှာချစ်ရသူတစ်ဦးအဘို့အအချစ်ဇာတ်လမ်း။ နည်းပညာ, ပုံနဲ့လိုင်းများ၏စုံတွဲတစ်တွဲ၏အကူအညီနှင့်အတူ: မိမိတို့လက်နှင့်အတူချစ်ရသူတစ်ဦးအဘို့အအချစ်ဇာတ်လမ်း။ တစ်ဦးရင်ခုန်စရာညဦးယံအချိန်ကောင်လေးစီစဉ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါးစပ်ထဲမှာစကားလုံး "မေတ္တာ" ကိုရှာကွ inception ...
ချစ်ရသူတစ်ဦးတစ်ရင်ခုန်စရာညဦးယံအချိန်ကဲ့သို့အ Options ကို Read more »
ဆက်ဆံရေး, မိသားစုနှင့်နေအိမ် / မှစ. နံရံကပျကျွွောငာ
အမြိုးသမီးမြားရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုထိခိုက်လွယ်ပါ! ကြီးမားသောအတိုင်းအတာအထိကသဟဇာတမိသားစုဘဝပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သို့သော်မေတ္တာနှင့်ဘဝ - ခကျခဲတဲ့ပေါင်းစပ်။ ဒါဟာအမျိုးသမီးပညာနှင့်သည်းခံခြင်းလိုအပ်သည်။ မကြာသေးမီက ပို. ပို. မကြာခဏနားလည်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကို personifying အသုံးပြုပုံစုံတွဲများလက်ထပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်အားလုံးအဖြစ်ချောမွေ့နှင့်ချိုမြိန်ဘူး။ မိနျးမ, အချို့နည်းနည်းအမှုအရာနှင့် ပတ်သက်. သူမ၏ခင်ပွန်း၏ချို့ယွင်းချက်တိတ်ဆိတ်စွာရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေ ...
ငါလက်ထပ်ထိမ်းမြား၌တိတ်ဆိတ်စွာနေအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့အဘယျသို့ Read more »
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ, ဆက်ဆံရေး / မှစ. နံရံကပျကျွွောငာ
တစ်ဦးကသွားတာဖန်စီနှင့်စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့လူကိုကောင်းစွာ သိ. အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်အာဟာရမှစတင်ကြောင်းစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာနှင့်ချစ်ခင်တူအောင်မထားဘူး။ များစွာသောမိန်းမလူကြီးလူကောင်းများ၏တွေရဲ့ရန်ကြည့်တစ်ချက်ခြင်းဖြင့်ဂုဏ်ပြုကြသည်, ဒါပေမယ့်အနည်းငယ်ချစ်စဖွယ်နှင့်အတူတစ်ဦးကိုခစျြတစျခုနေ့တိုင်းသူတို့ကိုကြည့်ရှိခြင်းဝါကြွားခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဆက်ဆံရေးမြတ်နိုးနိုင်ပါ။ မြောက်မြားစွာစစ်တမ်းများအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်တစ်ဦးသည်လူလေိုကွောငျးတငျပွခဲ့ကွ ...
အများဆုံးနှစ်လိုဖွယ်အမျိုးသမီး Valais Read more »
အတည်ပြုခဲ့သည်ဘွဲ့ "ယဉ်" ကိုဘယ်လို
အချို့လူများကလူယောက်ျားနှစ်ပေါင်း 40 လက်ထပ်မပါလျှင်, ကအလိုအလျှောက်မရှိတော့လက်ထပ်ဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်ကြသူခိုင်မာဘွဲ့၏အမျိုးအစားသို့သွားသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ သို့သော်နေရာတိုင်းတခြားကဲ့သို့ခြွင်းချက်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါဘွဲ့ကားအဘယ်သူနည်း ဒီအမြိုးသမီးမြားကိုခစျြသောသူသည်ကား, မိမိလွတ်လပ်ခွင့်ကိုမွတျနိုး။ ဤ "ယဉ်" ရန်နှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ ခက်ခဲပေမယ့်မဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အကယ်. ...
အတည်ပြုခဲ့သည်ဘွဲ့ "ယဉ်" ကိုဘယ်လို Read more »
အဆိုပါခွဲခြာဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့3ဖှယျအကွံဉာဏျ
အင်တာနက်ကဘယ်မှာသူမ၏အနာဂတ်ခင်ပွန်းနှင့်မည်သို့ထိမ်းမြားလက်ထပ်အတွက်ပျော်ရွှင်ဖို့ကိုရှာဖွေ, လက်ထပ်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အမျိုးမျိုးနှင့်ပြည့်စုံသည်။ သို့သော်ဤအချက်အလက်များ၏ရှိသမျှတို့, အဓိကအားဖြင့်သုံးဆယ်နှစ်အောက်မိန်းကလေးများသို့မဟုတ်ပင်တစ်ကိုယ်ရေအမျိုးသမီးငယ်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်, မိသားစုဆက်ဆံရေးတွင်ကိုမီးရှို့ကြပြီမဟုတ်သောသူတို့အဘို့။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့တဲ့မအောင်မြင်နောက်ကွယ်မှနေသောအမျိုးသမီးများ၏အကြောင်းကို ...
အဆိုပါခွဲခြာဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့3ဖှယျအကွံဉာဏျ Read more »